स्थानीय सम्वृद्धिको पर्याय अहिले क्वीचौ प्रान्त एउटा रक्सी व्यवसायको हव जस्तै हुन गएको छ। त्यहाँ रहेका १५७ वटा गाउँ जुनेलो उत्पादनका केन्द्र बनेका छन्। जुनेलोबाट माउ थाइ उत्पादन गरिन्छ। स्थानीय चिनियाँहरुका विचारमा माउथाइ चीन राष्ट्रको गर्व हो। किनकि उद्योग क्षेत्रले पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर उच्चस्तरीय प्रविधि र गुणस्तरलाई पनि कायम राखेको छ। उनीहरुका अनुसार स्थानीय अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भएको छ भने ७० हजार किसानलाई रोजगारी दिइएको छ। ७० देखि ८० प्रतिशत जनसंख्याको आम्दानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पाइच्यू उद्योगबाट आयातित छ।
माउ थाइ रक्सी कूटनीतिक मियो माउ थाइ विगत केही दशकमा चिनियाँ राजनीतिको एउटा मियो बनेको छ। चिनियाँ नेताहरुले पनि यसको प्रवर्द्धनमा योगदान गरेका छन्। नयाँ चीनका संस्थापक माओत्सेतुङ्ग मात्रै नभएर चौ एनलाई लगायतले यसको उत्थानमा प्रोत्साहन गरेका गरेका थिए। सन् १९४९ मा चौले उथाइलाई राज्यभोजमा समावेश गरिने मुख्य रक्सीको रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए।
नेपालको परिचायक रक्सी? रक्सी भन्नेवित्तिकै नेपालीहरु, अझ हिन्दु बाहुल्य समाजमा नकारात्मक रुपमा लिइन्छ। त्यसमाथि आधा नेपालले त जीवनभर रक्सी छोएको पनि हुँदैन भनिन्छ। सामाजिक रुपमा रक्सी पिउनु र मात्रा मिलाएर पिउनुलाई संसारमा जहाँ पनि स्वीकारिन्छ। संभवतः केही नेपालीले यस्तो प्रश्नको सामना गरेको हुनुपर्छ कि नेपालीको परिचायक रक्सीको नाम के हो? अनि कुनै विदेशी नेता आउँदा नेपाली नेताहरुले स्वागत गर्ने मौलिक ब्राण्डेड रक्सी शायदै होला। रक्सीका लागि अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिन्छ तर रक्सी उत्पादनले नेपालको ब्राण्ड कहाँ कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा यकिन छैन।
प्रकाशित १७ कार्त्तिक २0७४ , शुक्रबार | 2017-11-03 09:48:31